म मेरो कपाल चार पटक । यहाँ तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ के हो भने तपाईं - व्यवसाय - सबै वकिल दुनिया मा! कानूनी क्याफे वकिल संग अनलाइन.
म मेरो कपाल चार पटक । यहाँ तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ के हो भने तपाईं - व्यवसाय
पहिलो दुई पटक म रोजे ताले को प्रेम, तेस्रो पटक म रोजे सुन्दर लम्बाइहरू, र चौथो समय म रोजे संग छोराछोरीलाई बाल हानि. मेरो अनुभव मा, दान आफ्नो कपाल एक धेरै अधिक व्यक्तिगत उपहार पठाउन भन्दा एक जाँच गर्नुहोस् । पठाउन को एक टुक्रा गर्न आफैलाई एक बच्चा वा वयस्क छ जो एक रोग भन्ने गरेको कारण तिनीहरूलाई गुमाउन आफ्नोकहाँ मेरो कपाल जान एक पटक यो काटियो मेरो टाउको? हुन्छ जसले ? जसले बनाउँछ ? तिनीहरू कहाँ तिनीहरूलाई बनाउन? ? जो संगठन सबै भन्दा राम्रो छ? ताले को प्रेम गर्दैन चार्ज बच्चाहरु लागि, तर तिनीहरू कहिलेकाहीं बेच्न कपाल भने यो पनि छोटो वा ग्रे. एक पटक म मा किन, यद्यपि, यो अर्थमा गरे 'छोटो कपाल अलग गरिनेछ र बेचे गर्न विनिर्माण लागत । तापनि छोटो कपाल मा प्रयोग गर्न सकिँदैन, यो धेरै लागत कम गर्न मदत गर्छ,' यस्तो लेखिएको छ: 'हामी स्वीकार गर्न सक्छन् अनुदानले को खैरो कपाल । किनभने हामी मात्र प्रदान गर्न, छोराछोरी, हामी प्रयोग गर्न सक्दैन यो बाल मा एक तर यो बेच्न हुनेछ हाम्रो विनिर्माण लागत।' तर प्रवक्ता मलाई भन्नुभयो, यो कार्यक्रम बन्द भएको थियो को अन्त मा, पछि दिने हजारौं को दसौं भन्दा बढी विरामीहरु आफ्नो वर्षको अस्तित्व छ । 'अन्तिम भन्दा धेरै वर्ष, कृत्रिम कपाल प्रविधि कता सुधार दिने, कृत्रिम कपाल अधिक को एक 'वास्तविक बाल महसुस', बनाउन, तिनीहरूलाई लाइटर, कूलर गर्न लगाउने, र गर्न सजिलो शैली,' त्यो एक वक्तव्य मा भने । त्यो जारी: 'कारण यी प्रगति, विरामीहरु भन्नुभयो कि कृत्रिम अब आफ्नो मनपरेको विग विकल्प छ । यो परिवर्तन मा रोगी आवश्यकता निम्त्याएको छ मा कम मांग लागि वास्तविक कपाल, र यो समय आएको छ हाम्रो लागि गर्न तल हावा को सुन्दर लंबाई कार्यक्रम छ।' त्यसैले, यस समय वरिपरि, म सोधे सिफारिस गर्न अन्य संगठन, दान गर्न । पाँच कपाल दान गैर मुनाफ तिनीहरूले सुझाव: यो समय थियो किनभने म इन्च कपाल, म मदत गर्न चाहन्थे बच्चाहरु राष्ट्रिय, र म मन पर्यो कि तिनीहरूले चार्ज छैन कसैलाई लागि. एक प्रवक्ता भन्नुभयो व्यापार मा कि एक पटक सुन्दर लामो पर्याप्त थियो बाल अनुदानले मा आफ्नो संग्रह स्थान, तिनीहरूले पठाउन हुनेछ, एक ढुवानी गर्न बाल यहूदीय को एक ठूलो विग निर्माताहरु. बाल लगाउने गरे मा यसको कारखाना मा इन्डोनेशिया र त्यसपछि पठाइएको तिनीहरूलाई फिर्ता गर्न दिनुभयो जो, राम्रो-यात्रा बाल अमेरिकी क्यान्सर समाज वितरण गर्न यसको विग बैंक मार्फत हामीलाई । जहाँ तपाईं दान गर्न सक्छन् डलर पत्ता लगाउन जहाँ आफ्नो कपाल माथि समाप्त. भने प्राप्तकर्ता इच्छुक छ, तपाईं पनि एक फोटो प्राप्त तिनीहरूलाई लगाएका नक्कली कपाल देखि बनेको, आफ्नो कपाल, वर्णन गुमाउने उनको कपाल रूपमा 'एक बाहिरी देखाउनुभएको भएर बिरामी छ।' यो थियो एक निरन्तर सम्झाउने उनको शरीर थियो, लडाई मा क्यान्सर को नाली जब त्यो एक स्नान गरे, उनको तकिया जब त्यो माथि जगाए । खत्म पछि कीमोथेरेपी लागि उनको तेस्रो क्यान्सर संग, त्यो भने रही एक नक्कली कपाल थियो एउटा महत्त्वपूर्ण बढावा लागि उनको भलाई बनाउने, उनको जस्तै महसुस आफु फेरि । 'यो एक सानो बिट दुःख जस्तै, 'ओह त्यहाँ जान्छ, म मेरो बाटो मा छु भइरहेको गंजा, भन्नुभयो व्यवसाय मा.
'तर तपाईं भनेर आश्वासन भनेर विग छ, र तपाईं राम्रो महसुस यो।' पहिले त्यो हराएको उनको कपाल, यो मिल्यो र एक नक्कली कपाल देखि अमेरिकी क्यान्सर समाज सबै नै दिन मा.
त्यो प्रसारण: भने उनको बीमा कम्पनी थिएन लागत कवर विग दोस्रो समय त्यो लगाएका पछि एक उपचार, जो हैरान उनको छ । किन कि थियो त कृतज्ञ लागि गरेको समर्थन छ । एलन, वरिष्ठ निर्देशक मिशन को वितरण लागि को न्यूयोर्क र नयाँ जर्सी, भन्नुभयो व्यापार मा त्यो बेला तिनीहरूले शैलीहरू लागि दुवै, ज्यादातर महिलाहरु मा आउन को लागि. देश भर एक सैलुन, जहाँ क्यान्सर विरामीहरु आउन सक्छ बाहिर टिप्न एक नक्कली कपाल र यो व्यक्तिगत अनुकूल द्वारा एक व्यावसायिक स्टाइलिस्ट बस जस्तै गरे । 'यो छैन एक आकार सबै बस््छ । मेरो बाल छैन जस्तै कुनै अर्कै. हामी साँच्चै बनाउन प्रयास रोगी महसुस रूपमा सहज रूपमा सम्भव छ,' एलन भन्नुभयो । उपचार छ कि वदलाव आफ्नो जीवन शैली । नक्कली कपाल कम से कम छ भन्ने कुरा हामी के गर्न प्रयास गर्न तिनीहरूलाई बनाउन एक सानो टुक्रा महसुस बारेमा राम्रो छ।' जब व्यापार संग पक्रेको जनवरी, उनले भने, त्यो मा भएको छ, लागि दुई वर्ष, र पनि रोकियो लगाएका उनको विग यो गर्मी । प्रत्येक संगठन अलि फरक छ दान आवश्यकताहरु, जो तपाईं पाउन सक्छन्, आफ्नो वेबसाइट मा, वा तालिका मा माथि । तपाईं सुत्छन् सक्छन् घुम्रेको कपाल बाहिर पुग्न न्यूनतम लम्बाइ, तर कम से कम तहहरू पूरा गर्न छ कि नम्बर, वा तिनीहरूले शायद नहीं हुनेछ प्रयोग गरिन्छ । मा बाल धेरै वा रबर बैंड अघि तपाईं यो कटौती, त्यसैले यो रहन्छ सँगै जब तपाईं यो पठाउन. यो वास्तवमा गर्न बनाउन एक नक्कली कपाल तपाईं हेर्न भने यो पहिलो लाइभ भिडियो एम्बेडेड यो कथा मा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कसरी मेरो स्टाइलिस्ट बाल अघि उहाँले यो कटौती.
बाल गर्न छ, पूर्ण सुक्खा पहिले तपाईं यसलाई पठाउन, पनि, त्यसैले यो प्राप्त गर्दैन ढुसी लागेको छ । तिनीहरूले हालेका छन् बाल दूर भने यो छ । तपाईको कपाल सैलुन भने तिनीहरूले तपाईं एक छूट दिन वा पनि आफ्नो कपाल काट्न को लागि मुक्त हुनुहुन्छ भने, यो दान छ । बच्चाहरु को लागि छ, एक मा हरेक वर्ष अमेरिकी बढ्न सक्षम छन् आफ्नो बाल फिर्ता पछि तिनीहरूले पूर्ण उपचार, एक रोग पैदा गर्न सक्छ कि स्थायी बाल हानि. वा प्राप्त हुनेछ, यो केही बिंदु मा आफ्नो जीवन, अनुसार राष्ट्रिय जग, र यो अक्सर बाल्यकाल मा सुरु क्यान्सर, वा अर्को चिकित्सा कष्ट कारण छ कि तपाईं कम गर्न, आफ्नो कपाल बाहिर पुग्न संगठन हेर्न भने तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् एक नक्कली कपाल.
केवल तिनीहरूलाई केही प्रस्ताव वयस्क लागि, त्यसैले मनमा कि राख्न तपाईं एक चाहिन्छ भने र हो भन्दा वा. 'म संग परिचित भएको अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटी मार्फत आफ्नो र अनुसन्धान तिनीहरूले के भन्ने,' भन्नुभयो । 'तर यो थियो सान्त्वना थाहा थियो कि यो सारा अन्य पक्ष छ कि समर्पित समर्थन र तपाईं बनाउने तपाईं आफैलाई जस्तै महसुस छ, जो म सम्पूर्ण भाग अनुभव, पनि, किनभने यो संग सम्बन्ध आफ्नो सारा अर्थमा को भलाई छ । यो यस्तो अद्भुत सेवा।' यो कथा प्रकाशित भएको थियो जनवरी मा, जब लेखक उनको कपाल लागि तेस्रो समय छ । यो संग अद्यावधिक गरिएको छ नयाँ जानकारी । समय गरेको अप गर्न को जीवन को रूख सभाघरमा सिकार, यी हुन् अभियान भनेर खडा सबैभन्दा पैसा मा म खेद्नुभयो एक डलर, राम र एक डलर, चेवी पत्ता लगाउन छ जो राम्रो छनौटको ट्रक । यहाँ जूरीको फैसला । एलेक्जेन्ड्रिया -कोर्टेज गरेको बारेमा कामदारहरूको भुक्तानी भइरहेको 'भन्दा कम मूल्य तिनीहरूले बनाउन' मूलतः एक मार्क्स गरेको श्रम सिद्धान्त को मूल्य किन यहाँ भन्ने गरेको रोचक -डेभीडसन गरेको बिजुली मोटरसाइकल छ, एक चिकना नयाँ प्रतिद्वंदी छ कि एक -माइल सीमा र सबै कुरा ट्रैक गर्न सक्छन् को बारे मा आफ्नो सवारी अनलाइन भन्दा बढी पसल बन्द घोषणा गर्दै एक दिन मा रूपमा खुद्रा माध्यम, खाली, र भिक्टोरिया गरेको रहस्य म कोशिश एक अन्डा नाश्ता देखि, वफल हाउस, गरेको, र र विजेता थियो, सबैभन्दा.
गम्भीर अपराध ऐन
آنلاین رایگان مشاوره حقوقی در وام